MUsharixiinta “ waxaan uga digaynaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda, inay ku dhex milmaan howlaha siyaasadeed ee dalka ka jira | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii MUsharixiinta “ waxaan uga digaynaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda, inay ku dhex...
MUsharixiinta “ waxaan uga digaynaa saraakiisha iyo ciidamada dowladda, inay ku dhex milmaan howlaha siyaasadeed ee dalka ka jira
Kulan xalay Midowg Mushaxiinta ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxay ka soo saareen Digniin ku aadan in saraakiisha iyo ciidamada dowladda, ay ku milmaan siyaasada Somaliya.
Afhayeenka midowga musharixiinta mucaaradka ah ee Daahir Maxamuud Geelle oo saxaafada kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in wax kasta ay u diyaariyeen dadka banaanbaxa ka qeyb gelaya maalinta Jimcaha ah.
Sidoo kale Daahir Geele ayaa shaaca ka qaaday in qorshahooda uu yahay in salaadda Jimcaha lagu dukan doono fagaaraha Daljirka Daahsoon, isla markaana ay dadka u diyaariyeen ciidan ilaaliya ammaankooda iyo wax kasta oo adeeg ah, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa shalay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la mamnuucay dhammaan isu-soo baxyada iyo isu-imaatinnada dadweynaha, si looga gaashaanto faafidda xanuunka COVID-19.
Previous articleCali Yare Cali “Isbitaalka Martiini oo aan tagay waxaa yaala musiibo bin,aadamtinnimo oo balaaran, meydka ayaa ka buuxa bakhaar weyn
Next article Ingiriiska oo ka dalbatay Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay, in la joojiyo dagaalada ka socda dalal ay Soomaaliya jirto si loo gaarsiiyo talaalka Covid-19
. Waxa goor dhawayd Weerar Madaafiic ah lagu qaaday xerada Xalane ee magaalada Muqdisho, oo ah halka ay degan yihiin safaaradaha dalalka caalamka iyo hay’adaha...
Kulankii u socday Ra’iisul wasaare Rooble iyo Xubno ka socday beesha...
Saynisyahanno ka tırsan Jaamacadda Oxford ee UK oo sheegay in...